Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlay xaallada dhaawaca ee Paul Pogba – Gool FM
(Manchester) 26 Feb 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay xaallada caafimaad ee Paul Pogba.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France ayaan weli ka soo kabsan dhaawacii ka soo gaaray dhanka muruqa, wuxuuna maqnaanayaa dhowr toddobaad.
Pogba ayaa ku dhaawacmay ciyaartii ay barbaraha 3-3 la galeen Everton 6-dii February, waxaana tan iyo markaas uu seegay 5 kulan tartamada oo dhan ah.
Sidoo kale Daniel James ayaa sidoo kale seegi doona kulanka ay Chelsea ku wada ciyaari doonaan Axada horyaalka Premier League, kaddib markii uu dhaawac soo gaaray inta lagu guda jiray ciyaartii xalay ay barabardhac 0-0 kula galeen Real Sociedad tartanka Europa League.
Manchester United ayaa u soo baxday wareega 16-ka ee tartanka UEFA Europa League kaddib markii ay kulankii lugta labaad wareega 32-da ee tartankan ay ku kala baxeen barbardhac 0-0 ah kooxda Real Sociedad, xilli kulankii lugta hore uu ku soo idlaatay 0-4 ay ku soo adkaatay Red Devils.
Sidoo kale Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in weeraryahan Edinson Cavani iyo xiddigaha khadka dhexe ee Scott McTominay iyo Donny van de Beek ay ku dhow yihiin inay ku soo laabtaan kooxda.
Ole Gunnar Solskjær ayaa u sheegay Manchester United TV:
“Nasiib darro, maqnaanshaha Paul waxay sii socon doontaa dhowr toddobaad oo dheeri ah.”
“Waxaan rajeyneynaa in Edinson Cavani, Scott McTominay iyo Donny van de Beek la heli doono (kulanka soo socda), laakiin ma hubo taas.”
“Daniel James ayuu dhaawac soo gaaray… Waxaan rajeyneynaa inuusan halis aheyn, waa inaan marina baaritaano.”
Si kastaba ha ahaatee, ManUnited ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka iyadoo leh 49 dhibcood, waxayna 10 dhibcood ka hooseysaa kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City.